प्रचण्ड सप्रिए फेरि सहकार्य हुन्छ प्रधानमन्त्री ओली -भिडियो अन्तवार्ता - Muldhar Post
प्रचण्ड सप्रिए फेरि सहकार्य हुन्छ प्रधानमन्त्री ओली -भिडियो अन्तवार्ता
पत्रपत्रिका खबर २०७७, २ चैत्र सोमबार 390 पटक हेरिएको
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सप्रिए फेरि सहकार्य हुने बताएका छन् । आज राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अन्तर्वार्ताको क्रममा पत्रकार धमलाले तपाईँ र प्रचण्डबीच धेरै राम्रो सहकार्य भएको थियो ? आज त्यो सहकार्य एकाएक टुट्यो, अब सहकार्य हुन्छ त ? भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने,”प्रचण्डसँग सहकार्य हुन्छ, उहाँ सप्रिनुभयो भने सहकार्य हुन्छ । उहाँपनि यही लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र हुनुहुन्छ । निर्वाचन प्रणालीलाई मान्नुभएको छ । किन सहकार्य नहुनु ? तर, उहाँ सप्रिनुपर्यो ।”
हिन्दू राष्ट्र बनाउने तपाईँको चाहना हो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेपाललाई हिन्दूराष्ट बनाउनुपर्छ भनेर जनमतसंग्रहको माग गरेको कुरा आफूले नसुनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आज राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलाले सोधेको तपाई र विप्लवबीच जनमतसंग्रहमा जाने भित्री सहमति भएको छ अरे भनेर बाहिर चर्चा भएको छ, नेपाललाई हिन्दूराष्ट बनाउने ? यो कत्तिको सही हो ? प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने-“नेत्रविक्रम चन्दले हिन्दूराष्टको माग गर्नुभएको छ र ? मैले त सुनेको छैन त त्यस्तो कुरा ।”
पत्रकार धमलाले हिन्दू राष्ट्र बनाउने तपाईको चाहना हो भनेर सोधेको अर्को प्रश्नमा उनले भने-“नेपाल धार्मिक स्वतन्त्रता भएको देश हो । नेपाल सबै जातजाति, भाषा, भाषीहरु आस्था र विश्वासहरु भएका समूदायहरु, विभिन्न पेशा व्यवसाय जनताको साझा देश हो । यसलाई विवादको भूमरीमा पार्न खोज्ने, साम्प्रादायिकतामा तान्न खोज्ने, यो कुराहरु उचित होईन । हामीले साम्प्रादायिक सद्भावका साथ, विविधतामा एकताको नाराको साथ कुनैपनि हिसाबले तनाव बढाउने, कुनै हिसाबले जनताको मनमा ठेस पुर्याउने कुनै हिसाबले काम गर्नुहुँदैन् । यो सबैको साझा देश हो ।
यस साझा देशलाई सबैले समृद्ध बनाउनुपर्छ । आधुनिक देश बनाउनुपर्छ । यसलाई अत्यन्त शिष्ट, सभ्य र मर्यादित बनाउनुपर्छ । समान अधिकार अवसर भएको, सूरक्षाको सबैलाई प्रत्याभुति भएको, कोही पनि डर, त्रासमा बस्नु नपर्ने, सम्मानित जीवन सबैले बाँच्न पाउने स्थिति भएको देश निर्माण गर्नुपर्छ । सबै मिलेर सबैको लागि । त्यसो भएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को राष्टिय आकांक्षा हामीले तोकेका छौं । त्यसअन्तर्गत हामी जान्छौं । विवादतर्फ होईन् ।”
‘अर्याल होटेलका निर्णय र बुटवल भाषणमा तादम्यता छ’ : प्रधानमन्त्री ओली- नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेपनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बुटवलको भाषण र आफ्ना पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले अर्याल होटेलका निर्णयहरुमा तादम्यता मिलेको टिप्पणी गरेका छन् । माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरुको योजना नै नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी, कम्युनिष्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलन समाप्त पार्ने र विकासको योजना रोक्ने र समाप्त पार्ने रहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
आज राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने,त्यो कुरा उहाँहरुको योजना नै हो । त्यो कुरा, तपाई अर्याल होटेलको निर्णय हेर्नुस कि बुटवलको भाषण हेर्नुहोस, तादाम्यता छ नि । दुई तिर, कतै कुरा त लुकेको छैन । अनि मैले भेदभाव गरें भन्ने ? आउँदिन भन्ने अनि भेदभाव गरे भन्ने ? आउँदिन भन्ने, अनि पक्षपात गर्यो भन्ने ?